yeyiphi i-samsung enxibekayo onokuyikhetha: umdlalo wezemidlalo vs izixhobo ezilungele 2 pro vs gear icon x (2018) thelekisa
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Yeyiphi entsha enokunxitywa yi-Samsung ukuba ukhetha: IGear Sport vs Gear Fit 2 Pro vs Gear Icon X (2018) uthelekiso
Yeyiphi entsha enokunxitywa yi-Samsung ukuba ukhetha: IGear Sport vs Gear Fit 2 Pro vs Gear Icon X (2018) uthelekiso
Isamsung ityhile izinto ezintathu zokunxiba kwi-IFA 2017: iSamsung Gear Sport, iGear Fit 2 Pro, kunye neGear Icon X (2018).
Kwaye bahluke kakhulu: iGear Sport yi-smartwatch ejikelezileyo, iFit 2 Pro yibhanti yomzimba enenkangeleko yezemidlalo ngakumbi kunye nomboniso omncinci, kunye neGear Icon X entsha ziindlebe ezingenazingcingo ezingenazingcingo. Kodwa bonke benza ezinye izinto ngendlela efanayo, kwaye bonke banako ukukunceda ngandlela thile ngexesha lokuzilolonga.
Masikhe sijonge ezi zinto zintathu nokuba zahluke njani, hayi kummahluko ocacileyo womzimba, kodwa nakwiimpawu nokusebenza.
I-Icon yeGear X 2018: amanqaku ezemidlalo kwaye ilingana njani neMidlalo yeGear kunye neGear Fit 2 Pro
Okokuqala, i-Gear Icon X (2018). Ngelixa ii-earbuds zingenaso isivamvo sokubetha kwentliziyo esasikho kuhlelo lwantlandlolo, ezi zintsha zixhasa iBixby, iiSamsung kunye neapos; s umncedisi welizwi okrelekrele, kwaye ube nemowudi yoQeqesho oluQalayo kunye nexesha langempela, uhlaziyo lwendlebe. Uhlaziyo olukhulu kwii-headphone ezingenantambo, nangona kunjalo, ngokuqinisekileyo kubomi bebhetri: ukusuka kwiyure enesiqingatha kuhlobo lwantlandlolo, ngoku banokuhambisa umculo kangangeeyure ezintlanu, kwaye ityala abangena kulo likuvumela ukuba uphinde uphinde uphinde uzalise. I-Icon X ikwabonisa i-4 gigs yokugcina ebhodini, ukuze uthathe umculo wakho uhamba.
Umdlalo weGear kunye neGear Fit 2 Pro zombini zigqibezela ii-earbuds ngokubhekisele ekusebenzeni, ke-ewe-akukho thelekiso ngokwendlela yokulandela umkhondo womzimba.
Zombini ezemidlalo zeGear kunye neGear Fit 2 Pro zixhasa intsebenziswano entsha ye-Samsung kunye neapos; kunye neSpotify, Spotify ngaphandle kweintanethi. Le ndlela intsha ikuvumela ukuba uthathe iingoma zakho zeSpotify usendleleni xa ungenalo uqhagamshelo lwe-LTE.
Imidlalo yeGear okanye iGear Fit 2 Pro
Umdlalo weSamsung weGiya
Izixhobo ezibini oya kuthi unzima ukukhetha phakathi kwazo yiMidlalo yeGear kunye neGear Fit 2 Pro. Ngapha koko, umahluko omkhulu phakathi kwezi zimbini ukhangeleka kunye nescreen: iMidlalo ijikeleze, i-1.2-intshi Super AMOLED isibonisi esinesisombululo se-pixel esingu-320 x 320, ngelixa iFit 2 Pro yemidlalo egobile, inde kwaye icuthene 1.5- Iscreen se-AMOLED yesikrini esine-216 x 432 yeepixels zesisombululo Zombini zinikwe amandla yi-1.0 GHz ye-chip-core chip efanayo, kodwa iGear Sport ine-RAM ethe kratya: 768MB vs 512MB kwibhendi yomzimba.
Umahluko kubungakanani ufanelekile ukuba uqaphele:
42.9 x 44.6 x 11.6 mm, kubunzima obungama-50 g kwiGear Sport
25.0 x 51.3 mm, 34g (Enkulu) kunye ne-33g (encinci) kwiGear Fit 2 Pro
I-Gear Fit 2 Pro
Ngokubalulekileyo, iFit 2 Pro yeyona ikhululekile ukunxiba, ayisiyonto inkulu kwaye awunako ukuzilolonga ngayo ngaphandle kwengxaki, ngelixa iwotshi ibonakala kakhulu esihlahleni.
Ngokubhekiselele kwimisebenzi kunye nokulandelwa kwempilo, kukho ukulingana: zombini ukuhambisa izaziso, zombini zixhasa ukufumanisa ukuzenzekelayo kokusebenza kwaye zombini zingathathwa ngokuqubha ngenqanaba lamanzi le-5 ATM. Kodwa kulula kwaye ujonga ujongano kwiMidlalo yeGear: i-bezel ejikelezayo ingumncedisi omkhulu kwaye iFit 2 Pro ayinalo olu hlobo lokufaka.
Kukho umahluko kwixabiso: i-200 yeedola kwiFit 2 Pro kunye ne- $ 300 yeMidlalo yeGear.
Umdlalo weGear vs Gear S3
IGear S3 iza neencasa ezimbini, umda ombi kunye nokucoca, imodeli yeklasikhi
Kwaye ukuba uyazibuza ukuba ungayifumana i-pricer Gear S3 okanye i-Sportier Gear Sport, kuya kufuneka uyazi ukuba umahluko wokuqala phakathi kwezi zinto zombini uphelele emzimbeni: iGear S3 yi-smartwatch enkulu kakhulu, ngelixa iGear Sport inkulu, kodwa ayisiyiyolontoenkulu. Umdlalo unobuso bewotshi engama-43mm, ngelixa i-S3 inyikimisa ubukhulu obukwi-46mm. Kodwa ukuba nkulu, kuthetha ukuba iGear S3 inezinto ezininzi kwezinye izinto: inethuba ledatha ye-4G LTE, ukuze isebenze ngokuzimeleyo, ngelixa iGear Sport iswele lo msebenzi kwaye ifuna ukuba ubotshelelwe kwifowuni yakho. Imidlalo entsha ayinayo iMagnetic Secure Transmission (MST) kwaye ayixhasi intlawulo ye-MST kwiitheminali ezindala (kodwa isenayo i-NFC). IGear Sport icekeceke kancinci kwaye ilula, mhlawumbi ngokuchanekileyo kuba ayinayo imodyuli ye-LTE. Zombini zine-GPS eyakhelweyo yokulandela umkhondo ngokuchanekileyo.
Umdlalo weGear, nangona kunjalo, ngokucacileyo ulunge ngakumbi kwezemidlalo: inomboniso oqaqambileyo wamanzi we-5ATM ovumela ukuba uwukhuphele elwandle okanye elwandle, ngelixa uthotho lwe-S3 lungayixhasi into enjalo.
Umdlalo weGear vs Gear S2
I-Gear S2 yakudala inexabiso eliphantsi, ibhetele kwiizihlahla ezincinci kwaye isasebenza kakuhle
Yikholwe okanye ungakholelwa, i-Samsung Gear S2 endala kunye neGear S2 Classic ekhutshwe kunyaka ophelileyo isathengiswa kwaye iyafumaneka ngamaxabiso anenzuzo ayi- $ 250. Baqhuba ngokutyibilikayo kwiqonga leTizen le-Samsung & apos, kwaye zincinci kwaye zinesitayile ngendlela ejongeka ngathi imile okweGear S3 okanye iGear Sport ayizizo nje iiapos; t.
Kodwa zikwanazo neempawu: ngelixa zombini i-S2 kunye ne-S2 Classic ine-sensor yokubetha kwentliziyo, kwaye akukho kwiimodeli zithengiswayo ngoku ezinxibelelana ngokuzimeleyo kwedatha, okanye i-GPS. Kananjalo awukwazi ukudada ngelixa unxibe i-S2 kunye ne-S2 Classic, njengoko ezi zinto zimbini zinika inqanaba elisisiseko lokhuselo lwamanzi, akukho ndawo ikufuphi kufutshane nereyithi ye-5ATM yeGear Sport onokuyithatha ngokulula ukudada echibini okanye ulwandle.
Qaphela umahluko wamaxabiso ngokunjalo:
Imidlalo yeGear: $ 350
IGiya S2: $ 250
IGear S2 Classic: $ 300
Isamsung yenze ukhetho oluncomekayo lwezinto ezinxibekayo kunye neefowuni ezingenazintambo. Inento kuwo wonke umntu: ukusuka enkulu kunye nerhabaxa, kunye neempawu ezipakishwe ngeGear S3 phezulu, ukuya kuncinci kwaye zilungele iindadi zeMidlalo yeGear, kuthotho lweGear S2 esebenza kakuhle ngezihlahla ezincinanana, kunye neFit entsha 2 Pro yokomelela komzimba ekulungeleyo ukunxiba.
Ke ungaya kweyiphi?
I-Samsung yokunxiba entsha
Ingxaki yokuqaqamba kwe-samsung galaxy s6
Ungawajonga njani amandla esignali yesixhobo sakho se-Android
Xa iVerizon ilingisa isibonelelo sayo samahhala se-5G ye-iPhone, i-AT & T ihambise iinjongo zekhontrakthi yeminyaka emi-3
Uyenza njani inketho yonjiniyela kwi-Android (isebenza kwiGoogle Pixel, Samsung Galaxy S7, njl)
Uthotho lweApple 6: Insimbi engenanto ngaphandle kwealuminium
I-T-Mobile ityumza iVerizon kunye ne-AT & T kwenye ingxelo yokhathalelo lwabathengi
IMotorola iqala ukukhupha iMoto G5 kunye neG5 kunye ne-Android 8.0 yokuhlaziya i-Oreo